Archive du 20180905
Tabera Randriamanantsoa Tsy manaiky lembenana
Miteraka ahiahy ny manodidina ny fifidianana amin`izao fotoana. Misy ny fitoriana nataon`ny kandidà Tabera Randriamanantsoa mikasika ny didim-panjakana manaika ny mpifidy amin`ny 7 novambra ho avy izao.
Rakotomamonjy Jean Max Kandida tsy nahazo tsodrano
Tantara mitohy ny fifandroritana anaty ao amin’ny antoko Leader Fanilo.
CENI Manamboatra trano no mahaseriny azy
Mbola safotofoto sy mahabe adihevitra ny fanatanterahana ny fifidianana kendrena hangarahara, atokisana,
Jean Ravelonarivo Hanao fitondra-miaramila ?
Antoko ABA «Fifidianana no hanova toe-tsaina»
Manoloana ny fikasana isan-karazany sy ny fametrahana fangatahana eny amin’ireo ambaratongam-pitsarana misy eto amintsika ikasana hanemorana ny fifidianana tsy ho amin’ny 7
Hery Rajaonarimampianina Hijanona amin’ny toerany…
48 ora sisa ny fe-potoana hananan’ny filoham-pirenena ankehitriny hipetrahana amin’ny maha filoha voafidy tamin’ny fomba demokratika azy.
Saraha Rabeharisoa Mitaky ny hanajana ny zon'ny mpifidy
Tonga teny amin`ny Fitsarana avo momba ny Lalàmpanorenana (HCC) ny filoha nasionaly sady kandidan`ny antoko Paika sy Lamina ho an’ny Daholobe (PLD) Saraha Rabeharisoa ny alatsinainy 03 septambra lasa teo,
Inona daholo ary itony ?
Mba zavatra mahafinaritra amin’izay rangahy ampirevena anay amin’izao akaiky fifidianana izao a !
Zafivao Jean Louis Mampanonofy ny mpanao fanatanjahantena
Nanindraindra ny tetikasa momba ny mpanao fanatanjahantena indray omaly no stratejia notontosain-dry zareo avy eo anivon’ny antoko politika Gasy Mifankatia (Gasy Mi) tetsy amin’ny foibeny etsy 67 ha.
Riana Andriamandavy VII Hanangam-pahavalo amin’ny RNM sy TVM ?
Mihorohoro sy mitaintain-dava toy ny soabakaka ambodiriana ny mpiasan’ny haino aman-jerim-panjakana RNM sy TVM, indrindra ireo tompon’andraikitra ambonimbony, eo anatrehan’ny feo miely fa fanesorana izay mpiasa tsy akama.
Zaza menavava manan-jina Nalevim-belona tao anaty fasika fa avotra
Zazalahy kely vao teraka mbola miaraka amin’ny tadim-poitra no nisy nanary teo amoron-dalana tao Ambohipeno kaominina Amparafaravola.
Kaominina Didy Miasa irery ny mpitantana ny tanàna
“Miandrandra filoham-pirenena afaka mampandroso ny kaominina ny vahoaka. Mila vahana maika ny olana ara-pandriampahalemana sy ny lalana dia mandroso ho azy ny kaominina Didy”, hoy Atoa Roger,
Isan-taonan’ny Synodam-Paritany Fisakana Tontosa tao amin’ny FLM Andriankely
Tontosa tao amin’ny fiangonana FLM Andriankely kaominina ambanivohitra Tsarazaza distrikan’i Fandriana, tamin’ny 31 aogositra-alahady 02 septambra 2018 teo, ny Isan-taona faha-26 an’ny Synodam-Paritany Fisakana.
Super Coupe Analamanga Natolotry ny USCAR an’ny Ben’ny tanàna ny amboara
Tonga nanolotra ny amboara “Super Coupe Analamanga” ho an’ny Ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana, tetsy amin’ny Lapan’ny tanàna Analakely omaly talata 4 septambra maraina, ny ekipan’ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) taranja baolina lavalava na ny USCAR (Union Sportive Commune d’Antananarivo Rugby).
Barea de Madagascar Manantena ny fanohanan’ny mpijery
Niditra nitsapa ny kianjan’i Mahamasina hanatanterahana ny lalao hihaonana amin’ny Senegaley amin’ny alahady 9 septambra izao eo amin’ny fifanintsanana hahazoana hiatrika ny CAN Cameroun 2019 ny mpilalaon’i Barea voaantson’ny mpanazatra René Dupuis.
Tsy milamina ny tany
Miakatra ny maripana politika eto amin’ny firenena, ka toa misy tsio-drivotra hafahafa izany. Manomboka hita taratra ny mety hamafin’ny gidragidra tsy hifankahitana,
Loza teny Andohatapenaka Nikarepoka tao ilay mpitari-tsarety
Tery tao anelanelan’ny fiara 4X4 pick-up sy taksibe mampitohy an’i 67ha amin’Ampangabe Ambohitrimanjaka ny mpitarika sarety entin-tanana feno biriky tamin’ny loza nitranga tetsy Andohatapenaka, omaly antoandro.
Faritra Vakinankaratra Mahasarika ireo mpizahatany
Tsy nitsahatra nitombo ny isan’ireo mpizahatany tamin’iny faritra Vakinankaratra iny nandritra ny 5 taona farany. Nampiditra mpizahatany miisa 13 788 hatramin’ny 24 500 iny faritra iny ary tombanana hitombo hatrany amin’ity taona 2018 ity.
Orinasa afaka haba Nisy akony ratsy ny grevin’ny fadin-tseranana
Niteraka fahasahiranan’ireo orinasa afaka haba ny tsy filaminan’ny fadin-tseranana teto Madagasikara, hoy ny filohan’ny fikambanan’ny orinasa afaka haba Rakotoarisoa Hery Lanto.
Korea Atsimo Misisika mafy hampiasa vola eto Madagasikara
Ao anatin’ny fankalazana ny faha-25 taona niverenan’ny fiaraha-miasan’i Korea Atsimo sy Madagasikara izao dia nisy ny fihaonana lehibe voalohany momba ny fandraharahana natao tetsy amin’ny Carlton Anosy omaly talata 4 septambra.